Bacco Beach Pattaya ~ Journey-Assist - Ny tora-pasika tsara indrindra
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Pattaya » Bacco Beach
Bacco Beach any Pattaya
topy maso Bacco Beach
Tetezana Bakko eo amin'ny sarintany
Weather on the beach Bacco (Bacco Beach)
Sary sy horonan-tsary amin'ny tora-pasika Bacco (Bacco Beach)
Hotely Beachfront Bacco (Bacco Beach)
Ny hevitra momba ny Bakko Beach sy ny Bacco Beach Restaurant
Ity koa dia hotely lehibe Pinnacle grand jomtien. Ity ny latabatra kafe ao ambanin'ny kaonty, etsy an-daniny koa dia feno tanteraka izy, afaka hitondrana amoron'ny akorandriaka 20 metatra miala ny rano fotsiny ianao. Manaraka izany ny sisin'ny sarin-dàlana, nanomboka tamin'ny Febroary sy Martsa matetika misy rivotra mahery, izay mety tsara amin'ny famelomana katsaka tsara. Ao koa ny sekoly kitesurfing "KiteBoarding Asia KBA"
Ny fotodrafitrasa eo amoron'ny Bakko 🙂
Bacco Beach any Pattaya amin'ny sari-tany
Toerana marina ao amin'ny Pantai Bacco
Ao amin'ny Widget Interactive eto ambany dia afaka mahita ny toetr'andro ankehitriny amin'ny Bacco Beach. Ity ambany ity ny fandaharam-potoana ahafahanao mandroso, amin'ny alàlan'ny famoronana toetr'andro ho an'ny filanao.
Bacco Beach Sary sy horonan-tsary
Ny Pattaya rehetra amin'ny pejy iray
Hotely akaikin'ny Bacco Beach
Valiny ho an'ny Bacco Beach Restaurant (Google Reviews)
Reviews for Bacco Beach Restaurant (Tripadvisor)